၂၂ ရက်Augustဂုတ်လီယိုလား၊ - Oscရာဝတီ
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်မွေးနေ့ Horoscope
သြဂုတ်လ 22 ရာသီခွင်ကလူအပေါ်ဖြစ်ကြသည်လီယိုဗာဂျူးနက္ခတ်ဗေဒင်နယ်။ ဤသည် Exposure ၏နယ်နိမိတ်သည်။ နေနှင့်မာကျူရီသည်ဤနယ်နိမိတ်၏ဘဝတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ Sun ကသင်၏ Leo ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုထိန်းချုပ်သည်။ Mercury ဂြိုဟ်သည် Virgo ကိုအုပ်ချုပ်သည်။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်၊
အရအချစ်သဟဇာတ, အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်ဘို့ရန်လီယိုလူသည် Aries, Gemini, Libra နှင့် Sagittarius ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားရာသီခွင်လက္ခဏာများနှင့်အတူအလွန်ကောင်းစွာတလျှောက်ရအခိုင်အမာနေကြသည်လီယိုအခါအချစ်ဇာတ်လမ်းဆက်ဆံရေးအတွက်။၁၉ ။ 2021 ။
ရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာ၏ဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏကြားရသည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကားပြောနေတာကိုအဆင့်ဆင့်တယ်။
လီယိုသည်ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နှင့်သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင်ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရင်း ၆ ခုအကြောင်းပြောကြပါစို့။ သူတို့ကြည့်ရတာကောင်းပါတယ်အသွင်အပြင်သည်သိသိသာသာဖြစ်သည်ကိုငါသိသည်၊ သို့သော်သူတို့၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ofာန်များကိုဂရုစိုက်ကြည့်ရှုပုံ Leos သည်သူတို့သွားသည့်နေရာတိုင်း၌လူများနိုင်သမျှများများထံကောင်းစွာဆွဲဆောင်ရန်ကြိုးစားသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ ငါသူတို့ hoodie နှင့်ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွခွံထဲမှာထွက်မထွက်ရှိသည်ဟုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာငါတို့အားလုံးနို့ကိုဝယ်လိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့်ပေါ့ပေါ့ဆဆထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာ Leo ဟာအခန်းထဲမှာအကောင်းဆုံးဝတ်စားဆင်ယင်တာကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်။ သူမ၏ဆံပင်လည်းအချက်ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာအောက်မှာလူတွေဟာလူမှုရေးအခင်းအကျင်းတွေကိုကြည့်ကောင်းအောင်ကြည့်တတ်ကြတယ်။
သင်တင်ပြနိုင်သောပုံပေါ်ချင်တယ်။ ပြည်သူလူထုအတွက်သာမကဘဲအချို့သောလူများအတွက်သူတို့အထင်ကြီးစေလိုသည်။ သင်၏အသွင်အပြင်သည်သင့်အတွက်အရေးကြီးသောအခါလူတို့အနေဖြင့်သင်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းကိုရိုးရှင်းသောအချည်းနှီးဟုမှတ်ယူလေ့ရှိသည်။
သင်လီယိုနှင့်ချိန်းတွေ့သည့်အခါသူတို့ဝတ်စားဆင်ယင်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသင်သည်အကောင်းဆုံးသူများကိုရထိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဝတ်အစားတိုင်းကိုဝတ်ဆင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုသင်မသိပါ၊ တွေ့ဆုံမှုသည်ဘောင်းဘီတိုများနှင့် Justin Beiber တီရှပ်များတွင်ပါ ၀ င်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မသဘောကျပါ။ အဆိုပါ beibs အဘို့အဘယ်အရာကိုမျှ! အဲဒါလေးစားမှုပဲ ဤသည်လီယိုအမှတ်ရတယ်တစ်ခုခုပါပဲ။
လီယိုထက်ပိုပြီးအသည်းအသန်ရှိနေသောလူအနည်းငယ်သာရှိသည်။ မင်းမှာပန်းတိုင်တစ်ခုရှိပြီးအဲဒါကိုသင်အောင်မြင်ချင်တယ်။ တစ်နည်းပြောရရင်သူတို့ဟာသူတို့ဘ ၀ ကိုသူတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာပေါ်ကိုအပ်နှံကြတယ်။ စီးပွားရေး၊ အနုပညာ၊ အောင်မြင်မှုစသည်ဖြင့် Leo က ၁၁၀% ပေးသည်။
သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်မျက်မှောက်၌တည်ရှိ၏။ သင်၏မျက်စိသည်စျေးနှုန်းအပေါ်သို့ရောက်သည်။ မည်သည့်နှိုင်းယှဉ်မှုမျိုးကိုမဆိုသင်အသုံးပြုလိုပါကလီယိုအားအလုပ်ခွင်အခြေအနေတွင်တွေ့မြင်ဖူးပါသလား။ ရူးနေတယ်
သငျသညျယောက်ျားတွေသောကြာနေ့မှာပါတီဝင်နေစဉ်, လီယိုအိမ်မှာအခြေချစာအုပ်တွေရိုက်သွားတော့မည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိလေသာတွေအတွက်ကိုယ်ကျိုးစွန့်တာတွေလုပ်တယ် လီယိုသည်တစ်စုံတစ်ခုကိုချစ်မြတ်နိုးပါက၎င်းကိုဂရုစိုက်ပါ။
ဤသည်ကိုလည်း၎င်းတို့၏ရင်ခုန်စရာဘဝဆုကြေးဇူးကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါဤနိူင်ငံရေးနိမိတ်လက္ခဏာကိုသင်ချိန်းတွေ့သည့်အချိန်တွင်သင့်တွင်တကယ့်ရက်စွဲမရှိပါ။ လီယိုသည်သင်အမှတ်ရစရာအချိန်ရှိစေရန်သူ၏လမ်းမှထွက်သွားသည်။ သငျသညျပီဇာကိုစားချင်လျှင်ထို့နောက် pizza ပါ! အကယ်၍ ဆူရှီသည်သင်၏ ဦး စားပေးဖြစ်ပါကလီယိုသည်သူတို့၏အရသာအဖူးများတိုးချဲ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
သို့သော်အခြေအနေတစ်ခုရှိပါသည်။ သူတို့ကမင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနေသရွေ့သင့်ကိုသူတို့ပေးသည် လျှို့ဝှက်ချက်တွေလည်းမရှိနိုင်ဘူး။
လီယိုလိုချင်သည်မှာသူမပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသူဖြစ်သည်။ လီယိုနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအဆင်ပြေစေရန်၎င်းတို့သည်သင့်အား Ticas ကဲ့သို့စစ်မှန်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကငါ့နောက်အချက်တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်။
ဤစာရင်းကိုယခုထိသင်စိတ်ဝင်စားပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းရန်မမေ့ပါနှင့်။ Like Button ကိုသတိရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Beast ပါဝင်မှုနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရန်သတိပေးခေါင်းလောင်းကိုတီးပါ။ ဘယ်သူမှ HonestLeos မှာသူတို့စိတ်ထဲမှာအများကြီးမရှိတော့ဘူး။ ပြီးတော့သူတို့ကမင်းကိုအသိပေးလိမ့်မယ်။
၎င်းသည်သူတို့၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ကသူမအတွက်သင်တတ်နိုင်သလောက်သိပ်ရဲရင့်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ငါတို့တွေလည်းတစ်ခါတလေမှာ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတွေဟာရိုးသားတယ်လို့ယူဆသူတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပုံမှန်ပါပဲ။
ငါတကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ပြုမိပါဘူးငါသိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်လူတို့၏ခံစားချက်များကိုထိခိုက်ရန်ခက်ခဲသောနေရာတွင်နေထိုင်ရန်ပိုနှစ်သက်ကြသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုပြည့်နှက်လာသည်နှင့်အမျှအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒါဟာထူးဆန်းနေပုံရပေမယ့်ငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာရိုးသားတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတာကောင်းတယ်၊ ငါတို့လှည့်စားတာတွေကိုချိုးဖျက်တယ်၊ ငါကိုရိုင်းစိုင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်သူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ဘဝတွင်ဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမည်သူလိုအပ်သနည်း။ ကျွန်ုပ်သည်နက်ရှိုင်းသောအဆုံးမှအနည်းငယ်ဝေးလံစွာသွားခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးလိုသောမိတ်ဆွေများအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ ၀ တ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကအနည်းငယ်ထူးဆန်းနေပုံရတယ်။
ဒီတစ်ခါလည်းငါတို့မုန်းတီးပြီးပြုမူတာကိုသတိမပြုမိ ကျွန်ုပ်တို့ကိုမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးသည့်လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဤအရာများသည်လီယိုတွင်ပြသရန်မခက်ခဲပါ။ သို့သော်လီယို၏ရိုးသားမှုမှာလည်းအခြားနည်းလမ်းများဖြင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရန်မကြောက်ပါ။ ငါဆိုလိုတာကသူတို့ကဘာမှမပြောတဲ့အခါသူတို့ပြောတယ်။ လီယိုရဲ့ဝေဖန်မှုကတစ်ဖက်သတ်မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့သောအမှန်တရားများကိုပင်ထုတ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်သူတို့ပိုင်ဆိုင်သောအမှားများလည်းပါဝင်သည်။ များသောအားဖြင့်ခြင်္သေ့များသည်သူတို့ပျောက်ဆုံးနေသောaboutရိယာနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသောအခါ၊
သူတို့ဟာသူတို့မခံစားရဘူး၊ အမှားကိုလက်ခံရုံပါပဲ။ ၎င်းသည်သူတို့မကြာခဏမာနထောင်လွှားသော egomaniacs အဖြစ်ဖော်ပြသောပုံစံနှင့်ကွဲပြားသည်။ လီယိုသည်သူတို့၏ဘ ၀ ကိုအမိန့်ပေးပြီးသို့မဟုတ်အချို့သောရင့်ကျက်မှုအဆင့်သို့ရောက်သောအခါသူတို့၏အတိတ်ကအပြုအမူများကိုရောင်ပြန်မှန်ဘီလူးဖြင့်ပြန်ကြည့်နိုင်သည်။
ဒီကနေလူတွေကမင်းကိုဘယ်တော့မှမှားမှာမဟုတ်ဘူး၊ လူတွေကိုမတရားဆက်ဆံတယ်၊ နောက်တဖန်ဤဆောင်းပါး၏ရည်မှန်းချက်များထဲမှတစ်ခုသည်ပိုမိုကြီးမားသောနှလုံးသားတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ကျပုံစံကိုဖျက်စီးရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခြင်္သေ့၏စူးစမ်းရှာဖွေနိုင်စွမ်းနှင့်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအခြားသူများကိုစိတ်ကျေနပ်စေရန်သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေလိုသည်။ လီယိုအမျိုးသမီးများသည်ကောင်းသောအကျင့်များကိုနှစ်သက်သည်။
သူတို့သွားလေရာရာ၌ကြင်နာမှုပြရန်ကြိုးစားသည်။ ဤသည်နှစ် ဦး စလုံးရင်ခုန်စရာနှင့်ပလေတိုဆက်ဆံရေးကိုသက်ဆိုင်သည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတစ် ဦး သည်ဆိုးသောနေ့ရက်များကြုံရသောအခါသူတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုပေးရန်ကူညီပေးခြင်းသည် ဦး စားပေးဖြစ်သည်။
ယင်းကိုပါးနပ်သောအားပေးမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ရယ်စရာဟာသများမှတဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မင်းကြည့်ကောင်းချင်နေလိမ့်မယ်။ သင့်တွင်တိကျသောပန်းတိုင်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်အရူးမခံပါနဲ့ လီယိုသည်သူတို့နှင့်နီးစပ်သူများ၏သုခချမ်းသာကိုစဉ်းစားတွေးတောရသောအချိန်များစွာကုန်လွန်စေသည်။ ခင်ဗျားကခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုတန်ဖိုးထားတယ်။
သင်၏နှလုံး၏စွမ်းရည်သည်သင်ထင်သည်ထက်များစွာပိုပါသည်။ ဤသည်ကကျွန်ုပ်တို့အားအခြားခြင်္သေ့အားချစ်စရာကောင်းသောစရိုက်တစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်စေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ထပ်မသွားမီ, သင် quarantine စဉ်အတွင်းအမှိုက်သရိုက်များနှင့်အလွန်အကျွံသုံးစွဲပြီလော ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးကိုသင်ဘာကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်တက်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၁၀ ချက်ကိုကြည့်ချင်ပေမည်။ ခြင်္သေ့ကချစ်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းရင်း ၆ ချက်အကြောင်းပြန်ပြောပြတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီလီယိုရဲ့ကြီးမားတဲ့နှလုံးတစ်ခု extension ကိုအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ၀ င်ခွင့်အတွက်လုံလောက်သောအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ သူတို့ချစ်ရသူတွေနာကျင်ခံရတဲ့အခါခြင်္သေ့ကမကြိုက်ဘူး။
ဒါကိုရပ်တန့်ဖို့တစ်ခုခုလုပ်နိုင်တဲ့အခါသူတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ကြလိမ့်မယ်။ လီယိုသည်သင်၏ခံစားချက်များကိုနာကျင်စေမည့်အလားခံစားရလျှင်၎င်းတို့သည်သင်၏အနားတွင်ရှိရုံသာမကသင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုမှသင့်ကိုကာကွယ်ရန်လည်းကူညီလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်သူသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်ဟုယူဆသူတစ် ဦး နှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးရှိပါကလီယိုသည်သင့်အားထွက်ပြေးရန်နှင့်နေရန်သတိပေးပါလိမ့်မည်။ သင်သည်သူတို့၏ရည်းစားတစ် ဦး တည်းကိုကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောဆက်ဆံရေးတွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မင်းတို့လည်းဒါကိုပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ Leo တစ် ဦး ကသူတို့၏ကျော်ကြားမှုကိုရိုးသားစွာအသုံးပြုပြီးသင်၏သိသာထင်ရှားသောအခြားအရာများအကြောင်းအေးခဲ။ ကြမ်းတမ်းသောအမှန်တရားကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ဤလမ်းညွှန်သည် Leo အပေါ်ထားရှိသောသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုခိုင်မာလာလိမ့်မည်။ သူတို့ကဖန်တီးမှုအရည်တွေကိုစီးဆင်းစေတယ်။
ဤသည်လီယိုအသည်းအသန်သည်ငါတို့အစောပိုင်းကအချက်နှင့်ဆက်စပ်။ သငျသညျအတွေးအခေါ်များအတွက်ချို့တဲ့မဟုတ်သော Zodiac ၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ကြသည်။ ခြင်္သေ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖန်တီးမှုကလူဖြစ်ကြသည်။
သူတို့အခွက်တဆယ်မရှိဘဲဖြစ်ကြောင်းတစ်စက္ကန့်ဘို့မစဉ်းစားပါနဲ့။ သူတို့သည်မီးမောင်းထိုးပြသည့်အခါမင်းကို enter ည့်ခံကျေပွန်ရန်သေချာသည်။ ၎င်းသည်သီချင်းဆိုခြင်း၊ ကခုန်ခြင်း၊ ဟာသဖြစ်စေသို့မဟုတ်သိမ်မွေ့သောစရိုက်ရှိခြင်းဖြစ်စေ Leos သည်အမြဲတမ်းဖျော်ဖြေသည်။
အချို့က၎င်းတို့ကိုသူတို့ကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သော Divas များဟုထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းယင်းထက်မကရှိသည်။ အကြီးမားဆုံးသောဖန်တီးမှုစိတ်အချို့သည်လီယိုဖြစ်သည်။ ငါဂျနီဖာလိုပက်ဇ်နှင့်မက်ဒေါနားကဲ့သို့သောအဆိုတော်များအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
JK Rowling လိုစာရေးဆရာတွေကော။ ရောဘတ်ဒီနီရိုနှင့်ဂျနီဖာလောရင့်စသည့်သရုပ်ဆောင်များကိုလီယိုနိမိတ်လက္ခဏာအောက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဂျိုးရိုဂန်ကဲ့သို့သောလူရွှင်တော်များကခြင်္သေ့များလည်းရယ်စရာဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြကြသည်။ ဒါရိုက်တာများနှင့်ခြင်္သေ့မရှားပါ။
Stanley Kubrick၊ James Cameron, Alfred Hitchcock, Ke vin Smith, Wes Craven, Christopher Nolan နှင့် M. Night Shyamalan တို့သည် Leos ဖြစ်ကြသည်။ တစ် ဦး လီယိုရဲ့လိုအပ်ချက်အချိန်များတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးအရူးမောင်းနေစဉ်, ကသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချခံရဖို့ရှိပါတယ်။
မင်းဘယ်တော့မှမသိဘူး မင်းလုပ်မယ့်ပန်းချီကားမှာမင်းရဲ့အနာဂတ်ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုအမှတ်အသားတစ်ခုပဲရှိတာပဲ။ မင်းကလီယိုလား ဤစရိုက်များသင်နှင့်သက်ဆိုင်ပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
လောင်ကျွမ်းနေသောမီးကဲ့သို့လီယိုသည်ဖြစ်လေ့ရှိသည်နွေး, အသည်းအသန်နှင့်ပြောင်းလဲနေသော။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့သြဇာ, အားလုံးပါဝင်နိုင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးထွန်းလင်းစေရန်အခွင့်အလမ်းများအတွက်မွေ့လျော်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ခြင်္သေ့လိုပဲလီယိုဟာလည်းသန်မာပြီးသတ္တိရှိပြီးသူတို့လုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးဖို့အဆင်သင့်ပဲ။၂ ။ 2020 ။
လီယို-Virgo Cusp သဟဇာတ
TO သို့ကဗျာကိုယ့်ဒီများအတွက်အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လီယို။ကဗျာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောဖြစ်ကြပြီးပေးနိုင်ပါသည်လီယိုသူတို့လိုချင်တပ်မက်မှုနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းတို့သည် ပိုမို၍ သိုထားရန်၊
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာဘာထူးခြားလဲ။
၁၆၃၉ - မဒရပ်စ် (ယခုချန်နိုင်း) ကိုအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီမှတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုဒေသခံနေအုပ်စိုးရှင်များထံမှမြေကွက်အဖြစ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန် ၁၈၉၄ - Mahatma Gandhi သည် Natal India Congress (NIC) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်Natal ရှိအိန္ဒိယကုန်သည်များ။ ၁၉၂၁ - မဟတ္တမဂန္ဒီသည်နိုင်ငံခြားအဝတ်များကိုမီးပုံပြုလုပ်ခဲ့သည်။နှစ်ဆယ့်တစ် ။ 2020 ။
လူတစ်ယောက်နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်လူတစ်ယောက်အားရှာဖွေသောအခါထိုကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကိုရှာဖွေသင့်သည်Taurus, ကင်ဆာနှင့် Scorpioများသောအားဖြင့်အခြား Virgo ကဲ့သို့ Leo, Libra နှင့် Aquarius တို့နှင့်ဝေးဝေးနေသင့်သည်။
လီယိုနှင့် Libra အဆိုပါရာသီခွင်၏ရင်ခုန်စရာဖြစ်ကြပြီးတစ် ဦး Libra တစ် ဦး ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်လီယိုတစ် ဦး အဖြစ်အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်အချစ်ရယ်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်အကောင်းမြင်၊ ဖန်တီးမှု၊ အလွန်လူမှုရေး၊ အသွင်အပြင်များသို့ရောက်ရှိလာပြီးလူများဝိုင်းရံထားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ အဖြစ်Soul Soulနှင့် Libra: တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်အပြန်အလှန်ကစားခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်နှင့်ယုံကြည်မှုအရကြည့်လျှင်ကိုက်ညီသည်။
Leosအခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်သစ္စာသူတို့လာအဖြစ်။ ကျူးလွန်ပြီးတာနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့အနားမှာကပ်နေလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်အမင်းအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်မိတ်ဖက်များဖြစ်စေသည်။ ချိန်းတွေ့နေစဉ်Leos, အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာပါစေအချစ်သူတို့ကသင်နှင့်အတူရေချိုးခန်းရင်ခုန်စရာအာရုံကိုခံစားပါ။၁ ။ 2017 ။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားလာရင်မင်းရဲ့ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာကဘာလဲ။
အကယ်၍ သင်သည်သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားလာပါကသင်၏ Zodiac သင်္ကေတမှာဘာလဲ အကယ်၍ သင်သည်သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင်မွေးဖွားပါကသင်၏အမှတ်အသားသည်လီယိုဖြစ်သည်။ လီယိုသည်သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးသင်သည်အလွန်နွေးထွေး။ ဖော်ရွေသောလူဖြစ်သည်။ သင်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ချီးမွမ်းခံရပြီးအပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင့်ရဲ့လျှာကိုတကယ်ပဲကိုင်ထားလိုက်သည်။
လီယို၏သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင်မွေးဖွားသည်။
မီးနှင့်ကြွယ်ဝသောပတ္တမြားသည်လီယိုလူမျိုးများအထူးသဖြင့်သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင်မွေးဖွားလာသူများအတွက်ပကတိကျောက်ခေတ်ဖြစ်သည်။ ပတ္တမြားသည်သစ္စာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖော်ပြသည့်အဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီရာသီခွင်မွေးဖွားခြင်းကျောက်ပြားကိုဆွဲကြိုးများနှင့်နားကပ်များတွင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်မွေးနေ့နှင့်မည်သူကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သနည်း။
သြဂုတ်လ 22 မွေးနေ့ရာသီခွင်လိုက်ဖက်တဲ့။ သင်ဟာ Zodiac Sign Aries အောက်မှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်။ သင်က Zodiac Sign Taurus အောက်မှာမွေးဖွားလာသူတွေနဲ့မသင့်တော်ပါဘူး။ နေရဲ့ဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းမာမှုကြောင့်ဒီဆက်ဆံရေးဟာအောင်မြင်မှုမရနိုင်ပါဘူး။